Mpanamboatra hose hydraulika antonony fanerena - Famokarana sy orinasa mpamokatra hose hydraulic fanerena antonony any Sina
Inona no atao hoe hydraulic hoses?
Ny hose hydraulika dia mampita ranon-javatra hydraulika mankany na eo anelanelan'ny singa hydraulic.Ny singa dia misy valves, fitaovana ary actuators.Ny hose hydraulika dia mazàna malefaka sy manamafy.Ny hose dia matetika vita amin'ny sosona fanamafisana maromaro.
We High pressure hydraulic hose fantsona ho an'ny mpanamboatra traktera (mpanamboatra, fiarovana, orinasa)Omeosarin'ny haben'ny fanerena hose hydraulika sy hose hydraulika vita amin'ny randrana mora vidy amidy,Ny vokatray no orinasa lehibe indrindra.Miarahaba antsika mpanjifa vaovao sy taloha hitsidika!
Raha manana fanontaniana momba ny inona ny hose hydraulic ianao.Hanome ny valiny matihanina amin'ny fanontanianao izahay.
NYtsara kalitao hydraulic hosesdia atolotra amin'ny fanovana rehetra ilaina mba hamitana ny tetikasanao manaraka.Ireo fantson-drano ireo dia nohamafisina ary azo antoka fa hizaka ny fanerena ambony indrindra.
Ny hose hydraulic avo lenta dia atolotra amin'ny fanamafisana rehetra ilaina mba hamitana ny tetikasanao manaraka.Ireo fantson-drano ireo dia nohamafisina ary azo antoka fa hizaka ny fanerena ambony indrindra.
Ny tsipika hose hydraulic tonga lafatra ho an'ny fampiharana rehetra
Ny tsipika hose hydraulic dia miasa toy ny rohy mba hiantohana ny fifindran'ny angovo amin'ny rafitra hydraulic.Raha tsy mahomby izy ireo dia voa ny rafitra manontolo ary ny tsy fahombiazan'ny milina no vokany.Ny fampiasana hose hydraulic avo lenta dia manakana ny tsy fahombiazana toy izany sy ny fahasimban'ny milina lafo vidy.Raha fintinina: Mandaitra ny fampiasam-bola amin'ny akora hose avo lenta.
Avy amin'ny fampiharana finday ao amin'ny indostrian'ny fanorenana mankany amin'ny rafitra hydraulika mijanona ao amin'ny indostrian'ny sakafo, dia manarona ny fanamby rehetra izahay amin'ny alàlan'ny hose hydraulic isan-karazany ho an'ny tsindry ambany, antonony ary avo.
Sinopulsedia mpanamboatra hose hydraulic mitarika amin'ny varotra.Manolotra hose hydraulic izahay izay afaka manolotra fampisehoana avo lenta ary mahatohitra ny tontolo miasa mafy indrindra.
Ny hosesy dia natao mba hanatontosana amin'ny avo sy ambany ary ny fanerena ary mety amin'ny fampiharana isan-karazany.Ny hose hydraulic tsirairay dia mifanaraka amin'ny fenitry ny indostria henjana toy ny SAE 100 sy DIN. Manana mari-pankasitrahana ISO sy MSHA ihany koa izahay.
Ny Hoses Hydraulic dia ampiasaina amin'ny fampandehanana herinaratra mahery vaika amin'ny milina finday sy raikitra.
Ny hosesy nohamafisina dia afaka mifanentana amin'ny karazana adaptatera sy fitaovana isan-karazany.Ny hosodoko hydraulika dia natao hampiasaina amin'ny fluid hydraulika miorina amin'ny solika sy rano. Afaka mitantana lasantsy, gazoala, menaka mineraly, glycol, menaka fanosotra ary maro hafa.
Torohevitra, famokarana prototypes, famokarana kely sy lehibe
Hoses ho an'ny hydraulic tosidra ambony
Hoses misy fitaovana manokana
Hevitra namboarina ho an'ny OEM, ohatra ny kitting, famokarana ao amin'ny orinasa
Fametrahana amin'ny serivisy hydraulics haingana na ekipa fametrahana
Vokatra hydraulic mifandraika:
SAE 100 R5 vy vy nohamafisina hydraulic hose dia mety amin'ny fiantraikany antonony tsindry hydraulic solika mifototra amin'ny menaka, lubricating menaka, overheating menaka fanosotra sy ny rano & rivotra fantsona, toy ny rivotra frein, Specification: (1) Dash: R5-03 (2) ID Inch: 3/16″ mm: 4.8 OD mm: 13.0 (3) PSI: 3000
SAE100 R1AT/EN 853 1SN, tariby vy iray nohamafisin'ny mpamatsy hose hydraulic amidy Ampiasaina indrindra amin'ny rafitra hydraulika avo lenta ho an'ny fluid hydraulika mifototra amin'ny solika. 4″ mm: 6.4 OD mm: 13.5 (3) PSI: 3263
EN 857 1SC tariby vy manamafy hydraulika hose dia saika mitovy amin'ny EN 853 1SN vy vy nanamafy hydraulic hose amin'ny rafitra.Ary ny maha-samihafa azy dia ny savaivony ivelany kely kokoa,Specification: (1)Dash:1SC-04 (2)ID Inch:1/4″ mm:6.4, OD mm:13.5 (3)PSI:3263.